Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka XFS oo maanta lacagihii ay qaban jirtay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyadda – Radio Muqdisho
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka XFS oo maanta lacagihii ay qaban jirtay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyadda
Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lacagihii ay qaban jirtay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa ka qeyb qaadaneysa korarka dakhliga iyo hufnaanta nidaanka Maaliayadeed ee dalkeenna.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay Tallabada lagu mideynayo hanaanka Maaliyadda dalka.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Prof: C/llaahi Sheikh Cali “ Qalloocow” ayaa sheegay in nidaamkan dakhli wareejinta uu yahay mid lagu horumarinayo nidaamka maaliyadeed ee dalka,isagoona mas’uuliyiinta Wasaaradda Batroolka iyo macdanta ku ammaanay sida hufnaanta leh ee lacagihii ay qaban jireen Wasaaradda Maaliyadda ugu wareejiyeen.
Arrintaan ayaa waxay qeyb ka tahay hanaan la doonayo in Shacabka Soomaaliyeed kula socdaan lacagaha kala duwan ay qaadaan Hay’adaha Dowladda,iyadoo hanaanka Kombiyuutarka uu sahlayo daahfurnaan iyo isla-xisaabtan cad oo dhanka maaliyadda ah.
Wasaaradda Batroollka iyo Macdan ee Doowlad Federaalka Somaaliya ayaa ah hay”addii shanaad ee maanta ku Wareejisa Lacagahii ay qaban jirtay Wasaaradda Maaliyadda.
Madaxweyne Farmaajo oo xil ka qaadis ku sameeyay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare..AKHRISO
AKHRISO: Taariikh Nololeedka Guddoomiyaha cusub ee Maxkamada sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed